SERP nke oge a: Nlele Anya na Google's Boxes, Cards, Snippets Rich, and Panels | Martech Zone
O ruola afọ asatọ kemgbe m tinyegoro ndị ahịa m webata snippets bara ụba n'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, weebụsaịtị, na blọọgụ ha. Nsonaazụ nchọta ihe nchọta Google abanyego ndụ, iku ume, ike, peeji nke ahaziri ka ịchọrọ ịchọta ozi ịchọrọ… n'ụzọ dị ukwuu site na mmụba anya ha meworo na peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ na-eji data ahaziri nke ndị mbipụta nyere.
Nkwalite ndị ahụ gụnyere:
Direct Azịza igbe jiri azịza dị nkenke, ozugbo, ndepụta, carousels, ma ọ bụ tebụl ndị nwekwara ike ịnwe onyonyo iji mee ka ha dịkwuo mma.
Ntughari bara uba nyere site na ebe nrụọrụ weebụ iji bulie ntinye akwụkwọ nsonaazụ ọchụchọ na ọnụahịa, ọkwa, nnweta, wdg.
Kaadị bara ọgaranya maka ndị ọrụ mkpanaka enyi na enyi.
Ihe osise n'akụkụ aka nri nke SERP nke na-enye foto zuru oke na ozi gbasara ọchụchọ ahụ.
Omuma ihe omuma n'akụkụ aka nri nke SERP nke na-enye onyonyo ndị a gwọrọ, ozi, eserese na akwụkwọ ndekọ aha ndị akọwapụtara maka akara ma ọ bụ azụmaahịa.
Mpaghara Mpaghara (ma ọ bụ Mkpokọta Maapụ) bụ obi nsonaazụ ọchụchọ mpaghara na ozi azụmaahịa, nyocha, na maapụ. Ọrụ Google My Business na-arụ ọrụ nke ọma na mmelite yana nyocha nyocha.
Ndị Mmadụ Na-ajụkwa enye ajụjụ na azịza ndị metụtara ajụjụ.
Ihe Onyonyo bụ ihe carousel na-enweghị atụ na ajụjụ ndị a na-elekwasị anya.
Njikọ saịtị bụ ndepụta gbasaa nke njikọ njikọta na saịtị ndị ama ama. Ọ nwekwara ike ịgụnye saịtị ọchụchọ saịtị nke akọwapụtara na usoro nyocha saịtị ahụ.
Twitter carousel na-egosiputa ndepụta nke tweet kachasị ọhụrụ site na akaụntụ twitter.
Igbe Ozi bụ oge na-emetụta oge nke akụkọ na-agbasa na akụkọ kachasị elu na saịtị ndị ama ama.
Site na ịhazi data gị na ịgbaso ụkpụrụ Schema, akara nwere ike ịmetụta nzipụta ha n'ime atụmatụ ndị a na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ - ọkachasị mgbe ị na-eme ka nsonaazụ nke aka ha na ibe ahụ na-eji snippets bara ụba.
Enwere esemokwu dị egwu na nke a… nke Google nwere ike na-ndị ọrụ na ha search engine N'ihi peeji nke kama iweta ha na peeji nke ebe ị na-aga. Ọ bụrụ na ha nwere ike idebe ndị ọrụ ebe ahụ, ha nwere ike ịpị pịa mgbasa ozi, achịcha na bọta Google. Mana hey… Google nwere ndị na-ege ntị, yabụ ana m atụ egwu na ị ga-egwu egwuregwu ha. Olileanya, ka ị na-achọta nsonaazụ njin ọchụchọ na saịtị gị, ị na-arụ nnukwu ọrụ na itinye na ijide ozi onye ọbịa gị ka ị wee nwee ike ịmekọrịta mmekọrịta.
Google ekwughị naanị na ịnye data meta a nwere ike ibute ihe ngosi kachasị mma na SERP, ha kọwakwara n'ụzọ zuru ezu na snippets bara ọgaranya nwere ike imeziwanye nhụjuanya nyocha ọchụchọ gị niile n'ihi na ọ na-akụziri ha algorithms na ozi dị n'ime ibe.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị, ndị na-ere gị na ọdịnaya gị anaghị eji ya eme ihe ọgaranya snippets, ị ga-ahapụ gị na unyi site na ndị asọmpi na-eme. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa gị anaghị eti mkpu na ị mejuputa ha - ịkwesịrị ịchọta ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere akụrụngwa ma ọ bụ nke ochie nke na-anaghị akwado ha, ịkwesịrị ịkwaga ma ọ bụ mepee azịza nke na-eme. Snippets bara ọgaranya abughi naanị ime ka nchọta dịkwuo mma, ha na-emetụta ọnụọgụ pịa-karịa karịa ka echeburu.
Ihe omuma a sitere na Brafton, Ntuziaka Anya na Google SERP Njirimara: Snippets, Panels, Ads Adres na More, na-enye nkọwa nleba anya nke etu snippets bara ụba na ahaziri data si na peeji nchọta nsonaazụ ọchụchọ.
Tags: microdataụdị microformatọgaranya snippetsatụmatụnhazi iheNsonaazụ nchọta njin ọchụchọagwoakụkọ ụlọ n'okporo ámáwsj
Dị ka a na-achị, abughi m nnukwu onye na-ahụ maka akwụkwọ akụkọ, mana m ga-ekwu na nke a emeela nke ọma ma na-arụ ọrụ dị oke mma nke ịkọwa snippets bara ụba - ọkachasị banyere otu ha si emezi CTR na ntụgharị.
Kwetara, Jeff! Ha rụrụ nnukwu ọrụ.